Ọgụ ahụ na-aga n’ihu na mba Syria kemgbe ọnwa ole n’ole ebiri la ọkụ. Nke a malitere kemgbe abalị abụọ mba Amerịka malitere kwadowe ndị otu rebel ahụ na-ebuso gọọmenti Bashar Al-Assad agha.
N’abali abụọ gara aga, gọọmenti Barack Obama na White House kwuru sị na ha adịgo njikere ịgbado ndị otu agha nnwere onwe nke mba Syria ụkwụ n’azụ. Ha kọwara na ihe butere mgbanwe a bụ na ha achọpụtago na ndị agha mba Syria jiri nkwa agha sarin gas were busa ndị otu rebel ahụ ọgụ.
N’ambido ọgụ a, Amerịka kwuru sị na ha ga-etinye aka ma ọ bụrụ na gọọmenti Al-Assad nwaa anwaa were ngwa agha kemịkal wipọn were busa ndị rebel ahụ chọrọ ịchụpụ ya n’ọchịchị agha.